2019 | InfoKmada
Taona 2019 : maro ny ezaka mampiseho ny fanatanterahana ny velirano
InfoKmada - 31 décembre 2019 0
Be ny zavabita saingy maro ny asa miandry. Izay raha fintinina ny fanehoan-kevitry ny mpandinika ny fiarahamonina mahakasika ny tomban’ezaky ny asan’ny fitondram-panjakana ny taona 2019. Raha isany sehatra nahitana fivoarana ny fandriampahalemana, ny fotodrafitrasa sy ny fifandraisana iraisam-pirenena, tokony ho jerena manokana ny sosialim-bahoaka hoy ny olompirenena nanaovana fanadihadiana.
Iavoloha : tsy hisy intsony ny « présentation des vœux »
Rahampitso hariva no hitafa amin’ny vahoaka Malagasy ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Andry RAJOELINA. Fotoana hanaovany tatitra ny taona 2019, ary koa ho fampahafantarany ny vina ho an’ny taona 2020. Ny filohan’ny repoblika izay nanamafy fa tsy hisy intsony ny presentation des voeux fanao eny Iavoloha isan-taona rehefa taona vaovao.
Langoustes : voasokajy ho « produits de luxe », 1 hetsy ariary ny 1 Kg
Mbola vitsy amin’ny malagasy no manjifa langoustes. Voasokajy ho « produit de luxe » izany raha ny fanazavan’ny mpivarotra ary aondrana any ivelany avokoa ny 95%n’ny vokatra. Miverina misokatra manomboka ny voalohan’ny taona ny fahafahana mitrandraka « langoustes » eto Madagasikara.
Fanamboaran-dalana : nitondra fanazavana ny MAHTP
Namaly ny fanambarana navoakan’ny SEFAFI na ny Sehatra ho Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena ny 26 desambra 2019 teo , ny teo anivon’ny ministeran’ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy androany. Nitondra fanamarihana sy fanazavana mikasika ny fanamboaran-dalana eto Madagasikaraizy ireo. Araho ary ny fanambarana.
DASP : nanome fanampiana tao amin’ny fonjan’ Ankazondrano Fianarantsoa
InfoKmada - 30 décembre 2019 0
Nisitraka fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana sy ny Antenimieran-pirenena ny teo anivon’ny fonjan’Ankazondrano Fianarantsoa. Kojakoja maro no nozaraina tamin’ireo voafonja vehivavy sy zaza tsy ampy taona.
Taom-pambolen-kazo 2020 : misokatra ny 19 Janoary 2020
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny famerenena an’I Madagasikara ho Nosy maitso, misokatra ny 19 Janoary 2020 izao ny taom-pambolen-kazo 2020 . Ho zaraina maimaimpoana ny zanak’hazo ambolena , misy fepetra maromaro kosa anefa mila arahin ‘ireo izay mikasa hamboly izany.
29 desambra 1896 : nivoaka didy nisian’ny « Province des Betsimisarakas de Tamatave »
Ny « Arrêté » manambara ny maha faritany mahaleotena honenan’ny Betsimisarakas an’i Tamatave indray no entina aminao ato anatin’ny zana-pandaharana NY LASA eto amin’ny fampahalalam-baovaon’ny KOLO TV. Ny taona 1 896 no nivoahan’io didy io raha hiverenana ny tantara. Araho ary.
“Rencontre Nationale Sportive 2020” : homena tosika manokana ny atleta mendrika
Hotanterahana any La Frantsa ny faha-11 hatramin’ny faha-13 ny volana aprily 2020 ny fihaonambe ara-panatanjahantena ny Malagasy monina any Eropa na ny « RENCONTRE NATIONALE SPORTIVE ». Hampiavaka ity andiany faha-45 ity ny fandraisana antanana manokana ireo tanora mendrika, hisandratra eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena.
Tetikasa fihariana 2019 : olona 2 722 no hahazo famatsiam-bola
InfoKmada - 28 décembre 2019 0
Antontan-taratasy manodidina ny 17000 no voatazona ny taona 2019 ao anatin’ny tetikasan’ny Filohan’ny repoblika , Fihariana. Vola amina miliara maromaro arak’izany no hanantanterahana izany. Tsy hijanona anefa ny tetikasa fa hitohy ary efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ho an’ny taona 2020.
Imerimanjaka Alasora : nisavorovoro noho ny ady faty
Nitrangana savorovoro vokatry ny fikasana hamoaka sy handoro razana efa voalevina ny mponina teny Imerimanjaka Alasora anikeo maraina. Nilamina ihany anefa izany rehefa tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nandamina. Fantatra ihany koa fa efa eny anivon’ny fitsarana ity raharaha ity.